Patrice Evra oo isbar-bardhig ku sameeyay kooxihii uu u soo ciyaaray ee Man United iyo Juventus – Gool FM
Patrice Evra oo isbar-bardhig ku sameeyay kooxihii uu u soo ciyaaray ee Man United iyo Juventus
(Europe) 22 Okt 2019. Xiddiga reer France ee Patrice Evra ayaa qirtay in waayihiisii ​​kooxda Manchester United ay aad uga sahlaneyd marka loo eego waayihiisa Juventus oo uu ku qaatay kaliya labo sano iyo bar.
Patrice Evra ayaa wuxuu u ciyaaray kooxda Manchester United ku dhawaad ​​400 kulan intii u dhaxeysay sanadihii 2006 iyo 2014, wuxuuna Red Devils kula guuleystay shan horyaal oo Premier League ah iyo tartanka Champions League.
Si kastaba ha ahaatee, daafaca dambeedka bidix ee reer France ayaa qirtay in labadii xilli ciyaareed uu u ciyaaray kooxda Juventus ee dhamaadka xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta ay ahaayeen kuwo aad u adag.
Patrice Evra ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Waxaan kula guuleystay koobab badan kooxda Manchester United laakiin kama baqayo inaan sheego inaan dareemay sida inaan ku jiray fasax marka loo eego waayaheygii Juventus”.
“Qaabka ay ugu shaqeeyaan tababarka iyo xitaa labo maalmood ka hor ciyaarta ee hoteelka, xitaa waxay naga dhigeen inaan sameyno tababar maalinta ciyaarta, waana sababtaas aan ugu faraxsanahay heerka maskaxeed ee aan ugu ciyaaray kooxda Juventus, wuxuu ahaa loolankii ugu adkaa ee nolosheyda”.
“Waxay iskudayaan inay xakameeyaan ciyaaryahanka, waxayna kugu qasbayaan inaad raashinka ku cunto kooxda dhexdeeda, laakiin wax badan ayaan ka bartay iyaga, gaar ahaan heerka taatikada”.
“Kuma raaxeeysanin heerka nololeed halkaas, sababtoo ah waxaan xakameenayay nafteyda, laakiin waxyaabahaas runti waa u muhiim ciyaartoyda da’ayarta ah”.
Mane oo ka warbixiyay sida uu noqday dareenkiisa, kaddib kulankii ugu horreeyay uu la qaatay tababare Klopp